04/10/2018 - Page 4 sur 4 -
Marais Masay : Tsy ara-dalàna ny fanotofana tany
Araka ny didy nivoaka ny volana jolay lasa teo, laharana faha-1818272/2018, izay tapaka teo anivon’ny filankevitry ny minisitra, dia rarana ny fanotofana ny tany, ary iharan’ny sazy henjana ireo mbola tratra. Ankehitriny anefa miverina mahazo …Tohiny
Beach soccer – Tamaga Midôla : Tafita mialohan’ ny fotoana i Melaky
Voahaja ny lôjika. Tao anatin’ny andro efatra nifaninanana teo amin’ny taranja beach soccer amin’ilay “Festival Tamaga Midôla”, mbola tsy resy mihitsy ry zareo avy any Melaky. Hetsika ara-panatanjahantena karakarain’ny fikambanana Tafaray, ary tanterahina ao Toamasina …Tohiny
Tsy araka ny nieritreretan’ny CFM, sy ireo mpiara-miombon’antoka aminy ny zava-nisy tetsy Anosy omaly, nandritra ny fanaovan-tsonia ny dina sy fitsipi-pitondrantenan’ireo kandidà. Azo lazaina fa nampiseho tsy firaharahiana mihitsy ireo kandidà sasany, ary teo ihany …Tohiny
Efa nosokafana ny “van” lehibe mitondra ny rano avy any Tsiazompaniry mankaty an-drenivohitra. Efa omaly no nanatontosana izany, hoy ny avy amin’ny minisiteran’ny Rano. Tsy tokony hanana ahiahy amin’ny famatsian-drano ny rehetra. Efa hita ny ...Tohiny
Fambolena : Fototry ny fampandrosoana hoy ny Filoham-pirenena
Orinasa Jirama – Symbion Power : Miampy 40 MW ny famatsiana herinaratra